ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၃ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / UK / ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၃
ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၃
ကိုဗစ် ဟာ တဖက်မှာ အရပ်သားတွေကို ဒုက္ခပေးနေသလို -တချိန်ထဲ တဖက်မှာ နေတိုးစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကြီးကို အချင်းချင်းစိတ်နာ- စိတ်ဝမ်းတွေကွဲအောင် ထိုးခွဲနေပုံရတယ် ။ အီးယူအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအချင်းချင်း အချစ်ပြယ်အောင် အီးယူ ရဲ့ သွေးစည်းခြင်းတွေ ကိုလဲ ဖြိုခွဲနေတယ်။ အီတလီ စပိန်နဲ့ ပြင်သစ် တို့ အလူးအလဲ- အထိနာ အကျအဆုံးများစွာနဲ့ ခုခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ အီးယူနိုင်ငံတွေကအသေနဲတော့ အိန္ဒြေမပျက် အသံသိတ်မထွက်သလိုနေနိုင်ကြတယ် ။ ဂျာမဏီက ကိုဗစ် ရင်ဆိုင်တဲ့ ဗျူဟာ ကောင်း တယ်။ များများစစ်ဆေး များများ-အုပ်စုခွဲထုတ် ။ ကိုဗစ် နေစရာ ပုန်းစရာ မရ ခြုံခို မချနိုင် အောင် ပိုက်စိတ်တိုက် လူများများ စစ် ဆေး ၊ ကိုဗစ်ကို မြေလှန်ရှာတဲ့ နည်းကို သုံးတော့ အသေနဲပြီး အီးယူထဲမှာ အထင်ကြီးစရာ ဖြစ်နေတာ ပေါ့။ တကယ့်မြေပြင်အရှိတရား အမှန်တရား က နိုင်ငံတိုင်းဟာ အီးယူဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီးကို မေ့ထားလိုက် ပြီး ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ်ရှင်းနေကြရတာပါပဲ ။ ကိုယ့်နယ်စပ် တံခါး- ကိုယ့်အိမ်တံခါး ကို အသေပိတ် ပြီး -ကိုဗစ် ကို အသဲအသန် တန်ပြန် စစ်ဆင်ရေးလုပ်- အကြီးအကျယ် ခေါင်းမီးတောက် အောင် ဗျာများနေကြရတာဆိုတော့ အီးယူနိုင်ငံအချင်းချင်း သွား ကူနိုင်ဘို့ နေနေသာသာ ကိုယ့်အသက်ကို မနဲမွေး -ရတဲ့ အကြပ်အတည်း ထဲကို ကျနေကြတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကဒီလို အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မျိုး မှာ အချင်းချင်း မကူနိုင်ကောင်းလား ။ တရုတ်နဲ့ ရှရှားကမှ သိတတ်ဖေါ်ရ ။ ကူညီ ဖေါ် ရသေးတယ် လို့ ( Whistle Blowers )အော်ကြက်ထုတ်လာကြ တော့ မနေ့ကအီးယူကြေငြာချက်မှာ အကြီးအကျယ်ထိခိုက်တဲ့ အီးယူနိုင်ငံတွေ ကူဖို့ ယူရို ဘီလီယံ ၅၀၀ သုံးပါ့မယ် လို့ ထုတ်ပြောလာရတဲ့ အထိပါ ။
တကမ္ဘာလုံး နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေက ဒီကပ်ဆိုးမျိုး ကို မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကမ္ဘာစစ်လို့ ပြောကြတယ်။ ကမ္ဘာစစ် လို ပုံစံတခုလို့ ပုံ နှိုင်း ၊ နှုတ်က တဖွဖွ ပြောနေကြပေမယ့် နေတိုးအဖွဲ့ ကြီး ဘက်က ဒီလို အာရုံမထားဘူး။ ကြို ပြင်ဆင်ထားတာလဲ မရှိ၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့တာမျိုး ပါ ။ Cyber War Fare, Bio War fare တွေအကြောင်း ၊ တရုတ်လို ရုရှားလို နိုင်ငံတွေက အဲဒါမျိုး စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စဥ်းစားချက်တွေ ၊ သီအိုရီတွေ ရှိပေမယ့် လက်တွေ့ ကိုယ်ပျောက်သိုင်းနဲ့ ကိုဗစ်ဆရာ ရောက်လာတဲ့ အခါ သူ့ကို ဘယ်လို တုန့်ပြန်ရမယ်ဆိုတာ နေတိုး စစ်ဦးစီးချုပ်တွေ မသိတော့ဘူး ။ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က အမေရိကန် လေယာဥ်တင်သင်္ဘောကြီး သီအိုဒိုးရုစဗက် ပေါ်က သင်္ဘောသား ၃ယောက်ဆီမှာ ကိုဗစ် ရှိနေတာကို စတင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်။ မတ်လ-၃၁နေ့ရောက်တော့ သင်္ဘောသား ၁၀၀ လောက်ဆီ ကူးစက်သွားပြီ။ သင်္ဘောကပ္ပတိန်လဲ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ ပဲ မိတ်ဆွေ ၃၀ လောက်ဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ လုပ်ကြပါဦးလို့ အကြံတောင်းရတဲ့ အဖြစ်ရောက်သွားပါရော။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ရက်လောက် တုန်းက တော့ သင်္ဘောသား ၄၁၆ယောက် ( ကပ္ပတိန် ဘရက် Brett Crozier အပါအဝင် ) အထိ- ကိုဗစ်က ကူးစက်သွားပြီ ။ ကပ္ပတိန် ကြီးက သူ့သင်္ဘောသားတွေအသက် ကို စိုးရိမ်လို့ အီးမေးလ်တွေ ပို့မိတာ-အစထွက်သွားတော့ ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို သတင်းစာတစောင်က အနံ့ရ ဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါ လျှို့ဝှက်ထားရမှာကို ပေါက်ကြားစေမှု ဆိုပြီး ကပ္ပတိန်ကြီးက ပြုတ်တယ်။ သူ့ သင်္ဘောသားတွေ နဲ့ အစိုးရပိုင်းတချို့ကတော့ ကပ္ပတိန်ကြီး လုပ်ရပ်မှန်တယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အနုမြူလေယာဥ်တင်သင်္ဘောကြီးတစီး ကို ကိုဗစ်က ရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ဘာမှ အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင် တိုက်ခိုက်ပြလိုက်တာပေါ့ ။ ကပ္ပတိန်ဘရက်က သူ့သင်္ဘောပေါ်မှာ ခုလို ဗိုင်းယပ်စ်ပိုး မကူးအောင် အချင်းချင်း ခွါနေဘို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ဝန်ခံသွား တယ်။
( from Wiki - 2020 coronavirus pandemic on USS Theodore Roosevelt )
ကိုဗစ် က နေတိုး ကို ခြေထိုးသလို ဖြစ်ရ တဲ့ မျက်နှာဖုံး စွပ် ဇာတ်လမ်းကလဲ တမျိုး စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ ဆင်ခြင်စရာ ပြကွက်တခု ဖြစ်လောက်တယ်။ ပြင်သစ်က အဖိတ်အစင်များပြီး အတော်ခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ သူ- အသဲအသန်လိုနေတာမျက်နှာဖုံးစွပ်marks တွေ။ တရုတ်ဆီက အမြန်မှာတာပေါ့ ။ ဒီလို သူမှာထားတဲ့ -သူ့ဆီကို ပို့မယ့် ဆဲဆဲ မျက်နှာဖုံး စွပ် တွေကို လေဆိပ်ရောက်ကာမှ အမေရိကန်က စျေး ၃-၄ ဆ ပေးပြီး ပြင်သစ်လက်ကနေ ဖြတ်ခုတ် ယူသွားတဲ့ သတင်း တက်လာရော ။ ဒါဟာ နေတိုး မဟာမိတ် တွေကြားမှာ လုပ်ထိုက်သလား လို့ ဘီဘီစီ Hard Talk ကနေ စတီဗင်ဆက်ကားက နေတိုး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ( Jens Stolten Berg) ရွန် စတိုတင်ဘာ့ဂ်ကို မေးတဲ့ အခါ စတိုတင်ဘာ့ဂ် ခင်မျာ အိုးနင်းခွက်နင်း ပြန်ဖြေနေရတာကို မနေ့က တွေ့မိတယ်။
တရုတ်နဲ့ ရုရှားက နေတိုး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို ( စပိန်အီတလီ ကို PPE Masks ,Ventilators အသက်ရှူစက်တွေ စတာမျိုးတွေ ပေးလှူ ကူညီ ပညာရှင်အဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ကူညီ တာမျိုး တွေကို ဆိုလို) အကူအညီပေးနေနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ နေတိုးကိုယ်တိုင်က သူ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်- မကူညီနိုင်ဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအချွန်တွေနဲ့ မတယ်။
အမေရိကန်က တရုတ်ဗိုင်းယပ်စ်Chinese Virus ဆိုပြီး တရုတ်ကို ရှေ့ထုတ်တယ်။ နေတိုးက Global Unity နဲ့ သွားနေရတယ် ။ အမေရိကန်က ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး ကိုင်တွယ်နေတာ ညံ့တယ် ဆိုပြီး W.H. O ကို အပြစ်တင်တယ် ။ W.H. O က ကိုဗစ်နိုင်တင်း COVID-19 လို့ ပဲ သုံးပြီး ကိုဗစ်ဟာ နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူး နံမည်တပ် အပြစ်တင်တာတွေ မလုပ်ကြ ဖို့ W.H.O ဖက် က ခုခံနေရတယ်။
အာဖဂန် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဥ်တွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတာ _ အမေရိကန် တနိုင်ငံထဲ က အာဖဂန်ကနေ ရုတ်သိမ်းမယ်၊ နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တွေက ဆက်ကျန်နေမယ်ဆိုပြီး မညီမညွတ်ဖြစ်နေတာတွေ ကို စတီဗင်ဆက်ကားက ထောက်ပြ ဝေဖန်ပါ တယ်။
ကိုဗစ် ကြောင့် နေတိုးကြား နဲ့ အီးယူ အဖွဲ့တွေကြားမှာ အက်တက်တက် အသံတွေကြား ။ .နေတိုးအချင်းချင်း- အီးယူအချင်းချင်းအနာဂတ် ဆက်ဆံရေး ပုံစံတွေ ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ တချို့ကလဲ တွေးဆနေပါတယ် ။
၉.၀၄.၂၀ နေ့က ကိုဗစ် အထိတ်တလန့်ကိစ္စနဲ့ ပါကစ္စတန် က အာဖဂန်နစ်စတန် နဲ့ သူ့နိုင်ငံကြား Torkham အရပ်မှာ ပိတ်ထားတဲ့ နယ်စပ်ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ ပါကစ္စတန်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အာဖဂန်နိုင်ငံသားများစွာ သူတို့ နိုင်ငံထဲကို အမြန်ပြန်ပြေးဝင်နေကြတာလဲ တွေ့ရတယ်။
နယူးယောက် မြို့တမြို့ထဲ အဖိတ်အစင် က ၇၀၀၀ ။ အလောင်းတွေကို သိမ်းစရာနေရာမရှိတော့ ဘရောင့်စ် ဆိုတဲ့ ရပ်ကွက်နားမှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မြှုပ်နှံရတဲ့ အဖြစ်ကိုရောက်ပါတယ် ။ ဆွေမျိုးတွေကို ဆက်သွယ်မရ ပိုင်ရှင် မရှိ အသုဘ နဲ့ ရှိတဲ့တိုင် သင်္ဂြိုလ်စရိတ် မတတ်နိုင်တာတွေ ကို ခုလိုပဲ မြုပ်လိုက်ကြရတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖေါ်ပြပါ တယ်။ အခေါင်းတလားတွေမှာ နံမည် ထိုးထားပြီး တချိန်တတ်နိုင်လို့ မြုပ်ချင်ရင်လဲ ပြန်လာဖေါ်ပြီးပြန်မြုပ်လို့ ရကြအောင်. ။
စပိန်က မနေ့က အဖိတ်အစင်၆၀၅ ယောက် ဆိုတာကို သေနှုန်း ၁၄ ရက် အတွင်းမှာ အနိမ့်ဆုံးလို့ ဆိုပြီး စိတ်ဖြေကြ။ အကောင်းမြင်ကြပါသတဲ့ ။
ဗြိတိန်က --၉၈၀ တရက်ထဲ ဖိတ်စင်ပြီး ဥရောပ မှာ အထိအနာဆုံး နေရာကို ရောက်လာပါတယ်။
ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် က အခြေအနေ တိုးတက်လာပြီ မို့ အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်းကနေ ပြန်ထွက်လာနိုင်ပြီ ။လမ်းနဲနဲ လျှောက်နိုင်တယ်လို့ ကြားရလို့ စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ သူ့ မိန်းမလေးကလဲ လက်ခုတ်သံ တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ဘောရစ်ကို တွစ်တာကနေ လှမ်းပြီး ဝမ်းသာအားရတွစ်တာ တွေ့လိုက်မိတယ် ။
မြန်မာတွေလဲ ကိုဗစ် လက်စလက်နကို တွေ့လာနေရတော့ သင်္ကြန်ကို အိမ်မှာပဲ နေကြရတော့မှာ ဖြစ်သလို ဥရောပသားတွေလဲ သူတို့ အီစတာ အားလပ်ရက် ကို အိမ်မှာပဲ နေရင်း အချိန်ကုန်ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ခါတိုင်း နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေဆီက ငွေသဲ့ယူရတဲ့ Lake District အရပ် မျိုး ကို နယ်ခံတွေတောင် သွား မလည်နိုင်အောင် ရဲတွေက စောင့်ကြပ် ပိတ်ဆို့ထား တယ်။
စိတ်ချမ်းသာစရာနဲ့ အားတက်စရာ သတင်းလေးကတော့ စတက်ဖို့ရှိုင်းယားနယ် က ဖွားသက်ပြင်း ဂျွိုက် ဂိုးလ်စထရော်လ် အကြောင်းလေးပါ ။ အသက် ၉၇ နှစ်။ . မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဖျားပြီး ကိုဗစ် ပေါ့စတစ်နဲ့ ဆေးရုံရောက်။ အခု နလံထလို့ အိမ်ပြန်ရပါပြီ။ လာမယ့်အောက်တိုဘာ -သူ့မြေးမလေး မင်္ဂလာဆောင် အထိ သူ အသက်ရှင်နေဦးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဘုရင့် လေတပ်မတော်မှာ စစ်သမီး တပ်ကြပ်တာဝန်ယူခဲ့။ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတဲ့ အဖွားပေါ့။
ဝမ်းနည်းစရာက လန်ဒန်က မြန်မာအသိအကျွမ်းတယောက် ဆုံးပါးသွားတဲ့သတင်း ညကဖတ်ရ ပြီး ခုမနက် အမေရိကားက ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတယောက်လဲ ကိုဗစ်နဲ့ ဆုံးပါးလို့ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းကြတဲ့ အကြောင်း သတင်းတွေ တက်နေတာ ။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ ဒေါ်အိရေ။
ခွန်ဆိုင်း ( ၁၁-၀၄-၂၀၂၀ )
(မိုးမခ မှတ်ချက် - ခွန်ဆိုင်း၏ ကိုဗစ်ဒိုင်ယာရီ အခန်းဆက်များကို သူ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ အစုံအလင် ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ https://www.facebook.com/profile.php?id=1074880768 ။ မိုးမခကတော့ ကောင်းနိုးရာရာ တင်ဆက်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်)
ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၃ Reviewed by MoeMaKa on 7:32 AM Rating: 5